२०७७ भदौ २१ आइतबार, नेपाल सुनचाद्यी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार ३ सय रुपैयाँ पैतितोलाका दरले मूल्यम गिरावट आउँदै छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ... बाँकी अंश»
स्थानियको सारथी बन्दै रिद्धि सिद्धि
२०७७ भदौ २१ आइतबार, मकवानपुर। हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले कोरोना संक्रमण भई हाल गौरीटार आईसोलेसन वार्डमा रहेका ६२ जना संक्रमितहरुको लागी फलफुल, रोग प्रतिरोधातमक शक्ति बढाउनका लागी सोहि अनुसारको खाद्य सामाग्री र संक्रमित भई आईसोलेसनमा रहदा पनि निरन्तर घर परिवारसंग सम्पर्क बनाई राख्नका निमित्त नेपाल टेलिकमको रु २ सय बराबरको रिर्चाजकार्ड र एक थान तातो पानी खाने कप लगाएत बिभिन्न सामाग्री बितरण गरेको छ । ... बाँकी अंश»
उद्यमी तथा सांसद विनोद चौधरी कोरोनामुक्त
२०७७ भदौ २० शनिबार, काठमाडौं। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी १० दिनमा कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना परिक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी १० दिनदेखि एकान्तवासमा थिए । ... बाँकी अंश»
ढोरपाटन बाढी : ११ जलविद्युत आयोजना क्षति
२०७७ भदौ २० शनिबार, बागलुङ। लघुजलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि ढोरपाटन नगरपालिकाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा विद्युत् र सञ्चार सेवा विच्छेद भएको छ। बुधबार राति भुजीखोलामा आएको बाढीले ११ वटा लघुजलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ। ... बाँकी अंश»
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखा एक साताका लागि सेवा बन्द
२०७७ भदौ २० शनिबार, कर्णाली। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखाका कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि एक साताका लागि सेवा बन्द गरिएको छ। प्रदेश अस्पताल/पशुपंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षणका क्रममा शुक्रबार बैंकको नगद शाखामा कार्यरत एकजना कर्मचारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । बैंकका प्रबन्धक लीलाराम ढुङ्गानाले सेवाग्राही र कर्मचारीमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन एक साताका लागि सेवा बन्द गरिएको बताउनुभयो । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २० शनिबार, रत्ननगर। तीन हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञाले फार्ममा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बजारसम्म नपुग्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । पोल्ट्रीको राजधानीका रुपमा परिचित चितवनबाट बाहिरी जिल्लासम्म कुखुरा निर्यात गर्न नसक्दा मासुको मूल्यमा गिरावट आएको हो । एक हप्ताअघि प्रतिकेजी खुद्रा रु ४२० रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले रु २०० पुगेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण जिल्लाका मासु पसलहरु केही घण्टामात्र खुल्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
भारतमा डिजेलको मूल्य घट्यो, नेपालमा के होला?
२०७७ भदौ २० शनिबार, त्यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यम गिरावट आइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ २० शनिबार, कलेस्तीकै जौमाया कुमालले दिनभर भोकभोकै लाइनमा बसेपनि मल नपाएपछि रित्तै हात घर फर्कनुपरेको बताउनुभयो । चिनेका मान्छेलाई जतिबेला पनि मल दिएको तर आफूहरुले भने नपाएको उहाँको गुनासो छ । साँगेका विवि राईले चाहिएको बेला मल नपाएपछि कृषि पेशाप्रति नै आकर्षण घट्न सक्ने बताउनुभयो । “भन्नलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर चाहिएको बेला मल पाइँदैन, एक रोपनी क्षेत्रफलमा धान खेती गरेको छु । धेरै चोटी प्रयास गरे तर मल पाउन सकिन,” उहाँले भन्नुभयो । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ १९ शुक्रबार, नयाँ दिल्ली । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भारतमा २५ मार्चदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेको छ । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उत्पादनमुलुक र व्यापार व्यवसायहरु ठप्प भएका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी घुम्‍ने खतरा रहेको जनाइएको हो । ... बाँकी अंश»
खतिवडाले दिए राजिनामा, जाँदाजाँदै के भने?
२०७७ भदौ १९ शुक्रबार, उनले अर्थमन्त्रीकाे रूपमा साढे २ वर्ष भन्दा बढी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा करिब ७ महिना काम गर्ने अवसर पाएकाे बताए । ... बाँकी अंश»
किसान रुवाउने प्रचण्डका घरबेटीलाई कारवाही होला?
२०७७ भदौ १९ शुक्रबार, कोरोना कहरका कारण युवाहरु गाउँमै हुँदा र यस वर्ष मनसुनले पनि साथ दिएकाले वर्षेबालीको उत्पादनमा बढ्ने आपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारले समयमै मल उपलब्ध नगराउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमानहरु हुन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
साता भरि घटबढ सुनको मूल्य : ३ दिन बढ्यो, ३ दिन घट्यो
२०७७ भदौ १९ शुक्रबार, साताभरि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३ दिन घटेको र ३ दिन बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले शनिबार सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छैन । ... बाँकी अंश»
अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित, अर्थतन्त्रका ज्ञाताले वित्तीय अनुशासनलाई ट्र्याकमा ल्याए त ?
२०७७ भदौ १९ शुक्रबार, नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित प्राय: भएको छ । २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनित भएर अर्थमन्त्री नियुक्त भएका खतिवडाको सांसद अवधि गत फागुनमा नै सकिएको थियो । ... बाँकी अंश»
एसईई दिएका विद्यार्थी लक्षित अफर
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, इ–कमर्स कम्पनी अनलाईन साथी डट कम र के पढ्नेको सहकार्यमा एसईई पास विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी ‘अनलाईन शिक्षा सहयात्री योजना’ ल्याइएको छ । ... बाँकी अंश»
काठमाडौंमा दिउँसो १ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म ‘होम डेलिभरी’ गर्न पाइने
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गर्दा घरघरमा संक्रमण फैलिन सक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो हप्तादेखि उक्त सेवा बन्द गरेको थियो । यसरी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था दर्ता भइ नवीकरण भएको हुनुपर्ने र सोको प्रतिलिपि सेवा दिन जाने व्यक्तिसँगै रहेको हुनुपर्ने स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ । वस्तु वा सेवाको मूल्य अनलाइनमा अनिवार्य रुपमा राखेको हुनुपर्नेछ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य, सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना भएको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम हुनुपर्र्ने जनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, चक्रपथ पहिलो खण्डमा सडकमा रहेका संरचना हटाउनु पहिले नै निर्माण शुरु भएको थियो । सडक निर्माण शुरु भइसक्दा पनि संरचना हटाउन सकिएको थिएन । एकातिर सरकारी निकायले नै तुरुन्त युटिलिटी नहटाउने त अर्कातर्फ सडकमा रहेका घर टहरा नहट्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । विसं २०७१ मा शुरु भएको सडक निर्माण विसं २०७२ मा नेपालमा आएको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले गर्दा प्रभावित बनेको थियो । विभिन्न अवरोधका कारण सडक निर्धारित अवधिभन्दा केही ढिलो सम्पन्न भएको थियो । ... बाँकी अंश»
बीउदेखि मलसम्म मारमा किसान, किसान मारा कृषि मन्त्रालय हुनु र नहुनुको के अर्थ ?
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, किसानका घर, गोठमा, गाउँमा सरकार भएको प्रत्याभुति हुँदैन । त्यहाँ गएका कर्मचारी पनि फर्काएर सिंहदरबार तिरै ल्याइन्छ भने त्यो मन्त्रालय हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन । ... बाँकी अंश»
सरकार दलालको फाइदा मात्र होइन किसानको मर्का बुझ – कोइराला
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, ‘मल आउनुपर्ने धान गोडेपछि हो, बल्लबल्ल मल आएको छ । त्यहि पनि असहज छ । ५ दिनसम्म मलमा सहजता आउन सकेन भने किसानलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ ... बाँकी अंश»
नेविसंघद्धारा आयल निगममा तालाबन्दी
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, उसले कोरोना भाइरसले नागरिक घरमै थुनेर बसेको अवस्थामा नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने बेलामा पनि पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
सात सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको पनि घट्यो
२०७७ भदौ १८ बिहिबार, प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले गिरावट आउँदै छापावाल सुनको मूल्य ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोला कायम ... बाँकी अंश»